WAXAAN KU KORAAN AASIYA KALA DUWAN EE STRAWBERRIES ON OUR OUR: SIFOOYINKA, XEERARKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA - STRAWBERRIES
Kala duwan ee Strawberry "Asia" kuma jiro mid la mid ah gobolka ugu weyn adduunka.
Talyaaniga waxaa laga saaray 2005tii. Kala duwanaanta ayaa si fiican u koray beerahayaga, beeralayana way jecel yihiin.
Strawberry "Asia" labadaba faa'iido iyo faa'iidooyin, iyo qodobkan waxaad ka heli doontaa sharaxaad ka duwan kala duwan, iyo sidoo kale agrotechnology ee beerashada iyo aasaaska u ah daryeelka.
Ma taqaanaa? Shirkadda Faransiiska ee Eden Sarl waxay isku dayday inay diiwaangeliso urta strawberries sida ay calaamad u tahay. Nasiib wanaag, waa la diiday, iyada oo la tixraacayo xaqiiqda ah in ay jiraan ugu yaraan shan dhirbaaxo strawberry ah.
Qeexida noocyo strawberry ah "Aasiya"
Bushes strawberries noocyo "Aasiya" ballaaran oo ballaaran. Karolku waa cagaar, ballaadhan. Caleemaha waa qaro weyn oo dheer, leh qadar badan oo caws ubax ah. Berry si dhakhso ah ayuu u riixayaa racfaan muuqaalkiisa ah. Darajada "Asia" waxay ku haboon tahay gaadiidka dheer, waxaana sidoo kale lagu kaydiyaa waqti dheer heerkulka dhexdhexaadka ah.
Cabbirka hal maroodi oo ah "Asia" - 34 g. Waxa uu leeyahay qaabka qallalan. Midabkiisu waa casaan. Berry wuxuu leeyahay dhamaystir madow. Jirka waa mid aad u macaan, casaan oo midab leh. Waxay si fudud u soo baxaan duurka.
Muddadii bislaanshaha waa mid dhexdhexaad ah. Iyada oo hal baadiyaha waxaad heli kartaa qiyaastii 1.5 kg oo ah nooca berry ah.
Strawberries waa la qaboojin karaa, qasacadaysan, sidoo kale baabba'ay cusub.
Berry waxaa loo tixgeliyaa jiilaalka-adag iyo abaarta u adkaysta. Strawberry "Asia" waxay u adkaysatey cudurada fangas iyo cudurada kala duwan, laakiin waxaa saameyn kara xayrta budada ah, chlorosis iyo anthracnose.
Xulashada goobta iyo shuruudaha ciidda
Goob loo dhigo geedo strawberries "Asia" waa in laga ilaaliyaa qoraalada iyo dabaysha. Dhab ahaan, tani waa inay noqotaa meel bannaan ama meel yar, oo ujeedkoodu yahay koonfurta-galbeed. Waxaa fiican in aan ku beeri kareynin xayndaab ama goobo hoose, haddii kale waxay jiran doontaa ama siin doontaa goor dambe oo yar. Qorshuhu waa in uu si fiican u iftiimaa oo si fiican u waraabiyaa.
Cudurka strawberry ee "Asia" ayaa aad u doonaya dhulka. Haddii aad ku beeri lahayd dhoobada, karbonatiga ama carrada ciidda leh heer hoose oo humus ah, ka dibna chlorosis ayaa laga yaabaa inay ka muuqato duurka. Tani waxay sabab u tahay nafaqo la'aanta.
Ciidda for strawberries sii kordhaya waa in ay ahaato iftiin ee texture. Had iyo jeer waa inay ahaato mid si ku filan u biyuhu, laakiin ma noqon karto mid aad u qasan, sababtoo ah waxay taasi si xun u saameyn kartaa berry. Waa muhiim in la xasuusto biyaha dhulka.
Haddii ay kor u qaadaan dusha dhulku ka dhaw yahay 2 mitir, waxaa fiican in aan la isticmaalin aaggan.
Strawberry wuxuu dareemayaa wax xun xunxun, lowska, dhoobada iyo carrada qallalan.
Geedinta geedo strawberry dhalinyarada
Ka hor inta beeritaanka strawberries ee goobta, waxaad u baahan tahay inaad hubiso ciidda loogu talagalay caabuq by dulin. Waxay u baahan yihiin in la baabi'iyo, oo kaliya markaas si ay u galaan geedo beerto.
Dhirta yaryar ee strawberry ee darajada "Aasiya" laga bilaabo Abriil ilaa Sebtembar waa la beeray. Waqtigan waxaa loo tixgeliyaa xilliga sii kordhaya, iyo waqtigan dhirta ayaa leh waqti ay ku degto meel cusub ka hor bilawga ah ee barafka. Inta lagu jiro beeritaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo ciidda iyada oo 100 ton oo digada ah halkii 1 ha. Waxaa lagu bedeli karaa fosfooraska ama potassium (100 kg halkii 1 ha). Haddii aad rabto inaad ku beeri geedo strawberry March, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho geedo tayo leh. Waa inay ahaato kayd qabow, maxaa yeelay waa iyada oo kuu ogolaanaysa inaad hesho miro fiican.
Geedaha strawberries "Aasiya" xagaaga ayaa keenaya waxsoosaar wayn oo keliya haddii geedo lagu qaboojin doono qaboojiyaha. Xaaladdan oo kale, nidaamka xidid xidhan ee dhirta kuu ogolaanaya inaad ku koraan ay duurka caafimaadka leh iyo xooggan, kaas oo, marka hore, siin badan oo ubbooyin ubax. Iyada oo la beero sida guga soo socda, waxaad heli doontaa goosashada weyn ee strawberries soo xulay.
Hadda u tag dhulka. Sariiraha waa inay noqdaan trapezoidal. Masaafada u dhaxaysa waa inay ahaataa qiyaastii 45 cm Tani waxay xaqiijin doontaa koritaanka bilaashka ah ee duurka dhalinyarada iyo nafaqo ku filan oo xididada.
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad bixiso nidaam waraabineed oo waraab ah. Jidadka waa inay noqdaan qiyaastii 2 m. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalka nidaamka waraabka. Geedo beerto ayaa la daboolay.
Waxaa jira xeerar dhowr ah oo la raacayo. Sharciyadan waxay la xiriiraan dhirta beerto, maxaa yeelay waxay ku xiran tahay sii noolaanshaha cayayaanka.
Ma abuuri kartid warshad haddii xididkoodu uu xoqo. Nidaamka asaasiga ah waa in la dhejiyaa oo la riixo dhulka;
Burooyinkeeda qoyaanka waa inaysan dhulka hoostiisa ahayn. Waa inay ka sarreeyaan dhulka;
Kama aadi kartid xayawaan aad u qoto dheer, maadaama ay taasi keeni karto geerida kelyaha;
Waraabka faleebo ayaa bixiya waraabinta wanaagsan, laakiin ka hor intaan beeritaanka strawberries u baahan tahay in ay qoyaan ciidda.
Dhulku wuxuu u baahan yahay in la sameeyo qoyan, ka dibna lagu qasi karo kareem qaro weyn.
Taas ka dib, strawberries waxaa lagu beeray dhulka. 12 maalmood gudahood waxaad arki kartaa in geedo ka soo baxeen xidid ama aan.
Noocyada strawberries sii kordhaya "Asia"
Si aad u hesho goosashada weyn ee strawberries "Aasiya", ma dhammayn kartid shaqada beeritaanka - waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado asaasiga ah ee beerashada saxda ah.
Tallaabooyin ka hortag ah oo ka dhan ah cudurka strawberry
Inta lagu jiro dhammaan xilliga koritaanka firfircoon ee berry, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo macnaheedu yahay in la dilo cayayaanka iyo ka hortagga cudurrada.
Dalagga yaryar ayaa la keeni karaa spot caleenta cad oo caleenta ah, kalluun jaale ah iyo jeexdo xabuub ah. Marka la jeexjeexo iyo caleemaha cirridka waxaa lagu buufin karaa fangasiga sida Topaz. Qiyaasta waa sida soo socota - 1.25 kg halkii 1 ha. Iyada oo wax xayrta leh, "Bayleton" waxay caawisaa (u dhigma - 0.5 l halkii 1 ha).
Moobeyaal sidoo kale waa in la fuliyaa inta lagu jiro goosashada. Tusaale ahaan, kalluunka cawlku wuxuu burburin karaa ilaa 40% dalaggaaga. Waxay ku dhacdaa qoyaan badan iyo heerkulka hooseeya.
Si looga hortago tan, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto hadhaaga dhirta guga, adoo samaynaya dhir jarjar, qudaar strawberries oo masaafada u wanaagsan. Waa inaad sidoo kale ka saartaa beeraha beeraha leh oo si habboon u quudiya geedka.
Ma taqaanaa? Waxaa horey u heshay Gibril oo ah strawberries iyo strawberries - dhulkii cidlada ah. Ha ku dhufanin sariiraha, ma ka baqsan yahay saxmada, berry ku dheggan caleemaha, iyo wax ka yar hal kilo duurka. Warqadda "b" ee mawduuca lama seegayo - maaha si gaar ah, si aanay u wareersanayn strawberries joogto ah.
Strawberry "Asia" waa mid aad u jeclaanaya waraabinta, sida geedka kale. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u ogaatid marka waraabintu ay faa'iido u tahay, iyo goorta ay waxyeeli karto.
Si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibtid nidaamka waraabinta:
Guga waa ka wanaagsan yahay in biyo lagu jiro xilliga qaboobaha uu ahaa baraf yar;
Inta lagu jiro beeritaanka dalagga;
Ka dib goosashada.
Inta lagu jiro guga qalalan waxaa wanaagsan in la bilaabo waraabinta warshadda dhamaadka Abriil. Bishii Maajo, Juun iyo Julaay waxay ku filan tahay in ay biyo ku jiraan 3 jeer bishii. Bishii Agoosto iyo Sebtembar, waxaad biyo ka badan kartaa labo jeer. Heerka waraabka - 10 l Square. m
Inta lagu jiro ubax, xididdada dhirta ayaa si xun ugu falcelin kara biyo la'aan. Muddadan muddadaas waxa fiican in la abuuro nidaam biyo oo buuxa. Waxaa fiican inaad isticmaasho waraabinta waraabka. Haddii aadan awoodin inaad rakibtid nidaamka waraabka, waxaad ku waraabin kartaa strawberries gacanta.
Waa muhiim! Ha isticmaalin biyo qabow.
Waraabinta waa in la sameeyaa subaxa. Marka ay roobabku da'ayaan, waxaa fiican in la daboolo strawberries leh filim fudud. Heerka biyaha ee muddada ubax - 20 litir mitir labajibbaaran. m
Haddii aad rabto in aad qoyaanka ku hayso sariiraha leh strawberries, waxaad isticmaali kartaa cirbadaha geed.
Daryeelka strawberries sidoo kale waxaa ka mid ah saarista haramaha, sababtoo ah waxay noqdaan sababta koritaanka gaaban ee duurka strawberry.
Si loo ilaaliyo dhirta cawska, sariiraha leh berry waa in lagu daboolaa mulcho madow.
Haddii aanad raacin, beertaada waxaa soo weeraray caws, waxaa fiican in biyaha lagu safo oo laga saaro dhirta waxyeellada leh gacmahaaga.
Tani waxay khuseysaa xajmiga, sida tuugada. Farsamadu waa sida soo socota: hal gacan ayaa haya tuubada oo daadiya biyaha hoosta xididka dhirta, kan kalena waa in uu si qoto dheer u galaa ciidda caanaha loo yaqaan "liquefied" ciidda oo soo jiid geedka asalka ah.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad isticmaasho badeeco ka hortag ah oo ugu wanaagsan xagaaga: PUB, Prism, Select, Fusilad, Klopiralid, Lontrel 300-D, Sinbar iyo Devrinol.
Waa muhiim! Si taxadar leh u akhri tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka, si aanay u waxyeeleynin strawberries.
Loosen iyo spud waxay u baahan yihiin inta badan strawberries. Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo tan roobka ka dib ama marka caws ay soo muuqdaan. Loosen iyo spud waxay u baahan yihiin strawberries ugu yaraan siddeed jeer inta lagu jiro xilli sii kordhaya.
Guga waa foosha ugu horeysay. Tani waa in la sameeyaa marka ciidda la qalajiyo ka dib barafka. Badiyaa inta u dhaxaysa safarka iyo hareeraha duurka strawberry.
Ka hor inta aanad dabacsanayn, amooniyamta waa in lagu kala firdhiyaa sariiraha (120 g 10 mitir oo socod ah).
Waa muhiim! Marka dabacsanaantu aanay waxyeeleynin shinbir strawberry.
Waxay ku daboolan yihiin hoe ballaadhan oo qoto dheer oo ah 10 cm. Inta u dhaxeysa safafka waxaa loo isticmaalaa dhoobada ciriiriga ah. Waxaa loo soo bandhigay qoto dheer oo ah 7 cm, iyo hareeraha duurka - 4 cm. Ka dib marka aad dabacsan tahay waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto furrows yar oo dhinaca kale ah ee safka. Waa inay ahaataa qiyaastii 6 cm, 150 g oo ah superphosphate iyo 80 g oo ah sulfate potassium ayaa ku shubtay, isku qasan 1 kg khudaar crumbly ka hor. Taas ka dib, furrow waxay u baahan tahay in laga buuxiyo ciidda iyo tamped. Ka dib marka aad dabacsanayso safka safka, ku dheji lakabka mulch u dhexeeya saf.
Marka dalagga oo dhan laga goosto, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto cawska oo dhan goobta, ku jar jarjar, u ururi caleemo dhacday oo aad kala furfurto wareegga. Xilliga dayrta waxay ku qaataan looskii ugu dambeeyey ee strawberries.
Hilling waxaa loo sameeyaa si loo siiyo oksijiinka nidaamka xididka strawberry. Sidoo kale nidaamkan dartiis, qoyaanka waa la ilaaliyaa oo cawsku waa la baabi'iyaa. Haddii aad go'aansatid in aanad kicin, waxaanu degdegnaa inaanu ku digo in biyaha inta lagu jiro waraabinta ay si fudud u soconayaan jihooyinka kala duwan, iyo xididku weli way engegan yihiin.
Isticmaalka strawberries "Aasiya" waa in la sameeyaa dayrta iyo gu'ga, waxay kicin doontaa Bisaylkiisa ee berry, oo waxaad heli doontaa goosashada munaasibka ah.
Ma taqaanaa? Cagaarshowgu wuxuu ka kooban yahay asbiraha dabiiciga ah, xataa wax yar. Sidaa darteed, haddii aad leedahay madax xanuun, cun cuno dhowr rodol oo strawberries ah - wayna gudbi doontaa.
Under duurka strawberry ku talinaynaa in la sameeyo macdanta iyo bacriminta organic. Xilliga dayrta waxay ka fiican tahay samaynta fosfooriga iyo potash, iyo guga - nitrogen.
Laga soo bilaabo Bacriminta fosfatiga isticmaalaya superphosphate, ka potash - 40% cusbo potassium, iyo nitrogen - nitrate ama ammonium sulphate. Bacriminta macdanta waxaa loo baahan yahay in si siman loo daboolo duurka. Dharka dabiiciga ah, sida digada ama humus, waa in lagu dabaqaa dusha sare ee duurka. Bacriminta ugu fiican organic - digada qudhuntay. Waxay ka dhigaysaa iftiinka dhulka. Haddii aad isticmaasho isku dar digada oo biyo ah dhowr sano oo isku xigta, markaa uma baahnid inaad qodo ciidda.
By xilliga qaboobaha, strawberries waa in la diyaariyaa, kuwaas oo si loo kordhiyo qalabka caleen. Waxa uu u adeegaa sida difaaca dabiiciga ah. Xilliga dayrta waxaad u baahan tahay inaad si fiican u daryeesho duurka, sameyso quudin iyo la dagaalama dulinka iyo cudurada.
Xidid ilaa jiilaalka, qoryaha xididka ah, kaas oo soo jiidan kara, si fiican ayaa loogu daboolay dhulka. Hilling iyo mulching ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Xilliga xagaaga, waxaad u baahan tahay inaad kabixiso ciidda agagaarka baadiyaha. Tani waxaa la sameeyaa si ay xididdada dhaawacan u haystaan ​​waqti ay ku soo kabsadaan kahor bilawga xilliga qaboobaha.
Ilaalinta ugu fiican ee strawberries ka soo dhaxan waa baraf. Kani waa kuleyliyaha kuleylka oo weyn kaas oo carrada ka ilaalinaya in uu barafoobo.
Caleemaha, cawska, cawska ama dhirta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. Laakiin waxaa fiican in la isticmaalo dambe, sababta oo ah laamood miraha waa neefta. Waxaad isticmaali kartaa irbadaha yaryar, taas oo kuleylka kuleylka iyo u oggolow hawada inay maraan.
Haddii aanad awoodin inaad heshid cirbadaha lafice ama cireed, waxaad isticmaali kartaa agotex nonwoven daboolida alaabada. Waxay u ogolaataa biyaha iyo iftiinka, iyo sidoo kale neefsanaya oo jilicsan isbedelka heerkulka.
Waxa ugu khatarsan ee ku dhici kara strawberries xilliga qaboobaha, xitaa hoy, waa vypryvanie.
Iyada oo farsamooyinka beeraha haboon, strawberries si fiican qaboobaha iyo soo qaado goosashada weyn ee berry.
Ma taqaanaa? Wixii Japanese ah, strawberries double waa farxad weyn. Waa lagama maarmaan in la gooyo oo cuno kala badh naftaada, oo badh ka mid ah ku quudiso wadnaha quruxda badan ee jinsiga ka soo horjeeda - hubaal waxaad ku dhici doontaa jacayl.
Beerto iyo daryeel wanaagsan waa fure u ah kaydinta dheer ee strawberries "Asia". Haddii aad wax kasta oo saxda ah sameyso, waxaad heli doontaa goosashada mug leh oo aan wax badan ku dadaal.